स्टारका वर्षको एउटा मात्र फिल्म ? | Nepalisongskhabar.com
सबिता कार्कीको प्रस्तुतिमा “मुसुमुसु नहाँस” सार्बजनिक (भिडियो सहित)
प्रतिभाशाली गायक कपिल सापकोटाको ‘तिमीलाई नै’ सार्वजनिक ( भिडियो )
आयुषले ल्याए ‘निर्दोष माया’ ( भिडियो )
गायिका रानी शाक्यको डान्सिङ गीत ‘सल्लाघारी’ सार्वजनिक ( भिडियो )
दर्शकको रोजाइमा रुकमान र मेलिनाको ‘धेरै माया गर्छु’ ( भिडियो )
स्टारका वर्षको एउटा मात्र फिल्म ?
वर्ष २०७५ मा ९६ ओटा फिल्म प्रदर्शनमा आए । ती मध्ये अधिकंशले लागनीको ठूलो हिस्सा फिर्ता गर्न सकेनन् । फिल्महरु घाटामा गएपछि कम मात्रामा फिल्म निर्माण हुँदै छ । चल्तिका कलाकारहरु पनि अहिले फूर्सदिला देखिएका छन् । उनीहरु यसलाई ब्रेक भनिरहेका छन् । पुरानो शैली र प्रवृतिमा परिवर्तन ल्याउन कलाकार विश्राममा छन् । आसातित स्टार र उनीहरुको फिल्महरु ब्याक टू ब्याक असफल भइरहँदा वर्षमा एउटा फिल्म खेल्ने तर गुणस्तरिय फिल्म खेल्ने योजनामा कलाकारहरु रहेका छन् ।
प्रदीप खड्काबाट दर्शकले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । उनका फिल्महरु रोज र लभ स्टेशन फ्लप भए । लगातार दुई फिल्म असफल भएपछि उनीमाथि स्डारडम जोगाउन र छवि धुमिल पार्नबाट जोगिन दवाव छ । उनले निधो गरेका छन् वर्षको एउटा फिल्म खेल्ने । उनलाई लाइमलाइटमा ल्याएको ब्राण्ड प्रेमगीतको साहारामा पुगेका छन् । जसको लागि कलाकार छान्ने दौडधुपमा समेत उनी सामेल भएका छन् । उनलाई कुटील नायक भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । नायक भन्दा पनि माथि रहेर फिल्मका अन्य निर्णायक कुराहरुमा सहभागि रहन्छन् । प्रदीप प्रेमकै भूमिकामा ह्याट्रिक गर्ने तरखरमा छन् । लभर ब्वाईको रुपमा उनलाई दर्शकले कतिको रुचाउँछन् त्यो भने फिल्म प्रदर्शन पछि नै थाहा हुनेछ । अहिले फिल्म यूनिट कलाकार फाइनल गर्न र वर्कशपमा व्यस्त छ ।
अर्का स्टार अनमोल केसी पनि अहिले विश्राममा छन् । लभर ब्वाई क्यारेक्टरमा रुचाइएका उनी अन्य भूमिकामा उतिसाह्रो रुचाइएका छैनन् । उनी अभिनित फिल्म क्याप्टेन कमै रुचाइयो भने ए मेरो हजुर ३ दर्शकले रुचाए । उनी र सुहाना थापालाई लिएर निर्देशक झरना थापाले भागवत गीता नामक फिल्म बनाउने भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो । त्यस्तै सोही जोडी ए मेरो हजुर ४ मा पनि दोहोरिने चर्चा थियो । अनमोलले भागवत गीता फिल्म खेल्ने तर ए मेरो हजुर ४ फिल्म खेल्न रुचि नदेखाएको चर्चा पनि चलेको थियो ।
उसो त वितरकले झरना थापालाई भागवत गीता भन्दा अघि ए मेरो हजुर ४ बनाउन सुझाएको खबर पनि बाहिरिएको थियो । तर, अहिले अनमोलले कुनै फिल्ममा साइन गरेका छैनन् । उनलाई लिएर सफल निर्देशक प्रदीप भट्टराईले कमेडी जन्राको फिल्म बनाउने चर्चा पनि सेलाएको छैन । पहिले पनि वर्षको एउटा मात्र फिल्म गर्ने भनेका अनमोलले वर्षमा एउटा मात्र फिल्म गर्ने मनस्थितिमा पुगेका त होइननु् ? धेरै फिल्म खेलेर झुर फिल्म दिनु भन्दा एउटा फिल्म खेल्ने र गुणस्तरिय फिल्म खेल्ने उनको सोच रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
फिल्म यात्रा पछि नायक सलिनमान अहिले विश्राममा छन् । उनी पनि फिल्मको संख्या भन्दा गुणस्तर धेरै हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । थोरै फिल्म गरौँ तर, राम्रो फिल्म गरौँ भन्ने सोचमा छन् उनी । फिल्ममा अभिनय गर्दा प्रतिकुल मौशममाको स्थलमा पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिकुल मौशममा काम गर्दा गाह्रो हुन्छ नै । मौशमको कारणले गाह्रो हुँदा अब फिल्म नै खेल्दिन भन्छन् सलिन । कहिले वर्षको एउटा मात्र फिल्म खेल्छु भन्छन् । तर, आफूलाइ धपेडी नहुने र प्रचार–प्रसारको लागि समय रहे चित्तबुझ्दो स्क्रिप्ट आएमा अरु फिल्म पनि खेल्ने बताउँछन् ।
Published date : 2019-06-28
बाबुरामप्रति आक्रोसित करिश्मा भन्छिन् “म उहाँको फोन पनि उठाउँदिन”
४५ वर्षको उमेरमा करिश्माले लगाएको पोशाक समाजिक संजालमा भाइरल
क्यामेरामा रेकर्ड भएको लाइभ मृत्यु
इन्दिरा र विरुको तीज कोशेली ‘जुल्फी लर्काउदै’
प्रमोदको स्वर र रामकृष्णको शब्दमा ‘यो माया के हो’ सार्वजनिक ( भिडियो )
सिर्जना किराती, सुरज श्रेष्ठ, मन्दिर ढुंगाना लगायतको अभिनयमा ‘शितल दिने कर्के नजरमा’
संचारकर्मी शरण हुमागाईंको “भिरैको खनायो” बजारमा आयो (भिडियो सहित)